Orinasa mpanamboatra China DDI (Dimeryl Diisocyanate) | YANXA
Vovoka vy sy vovo-dronono
Product: Dimeryl diisocyanateI DDI 1410） CAS No.. 68239-06-5
Drafitra molekular ： C36H66N2O2 EINECS: 269-419-6
Fitandremana sy fitandremana fitehirizana: TANDREMO mafy ny mihazona azy ireo rehefa tsy mampiasa. Fivarotana amin'ny toerana maina.
Dimeryl diisocyanate (DDI) dia diisocyanate alifatika tsy manam-paharoa (dimer fatty diisocyanate) izay azo ampiasaina miaraka amin'ny fitambarana misy hidrôzenina mavitrika mba hanomanana derivatives lanjan'ny molekiola ambany na polymers manokana.
Ny DDI dia fitambarana rojo lava miaraka amina rojom-be misy asidra dimerika misy atôma karbonika 36. Ity firafitra hazon-damosina ity dia manome ny fahafaha-manao ambony DDI, fanoherana ny rano ary fanapoizinana ambany noho ireo isocyanat aliphatic hafa.
Ny DDI dia ranon-javatra ambany viscosity izay mora vonoina amin'ny ankamaroan'ny solvents polar na nonpolar.
13.5 ~ 15,0
1) ny angona teknika rehetra voalaza etsy ambony dia ho anao.
2) tongasoa manokana famaritana manokana ho an'ny adihevitra fanampiny.
Ny DDI dia azo ampiasaina amin'ny propellant rocket matevina, ny famaranana ny lamba, ny taratasy, ny fanodinana hoditra sy ny lamba, ny fitsaboana amin'ny fitehirizana hazo, ny famokarana herinaratra ary ny fanomanana fananana manokana amin'ny elastomeran'ny polyurethane (urea), ny adhesive ary ny sealant, sns.
Ny DDI dia manana toetran'ny poizina ambany, tsy misy mavo, mihalefaka amin'ny ankamaroan'ny solvents organika, mora tohina amin'ny rano ary ambany viscosity.
Ao amin'ny indostrian'ny lamba, DDI dia mampiseho vinavina fampiharana tsara amin'ny famonoana rano sy ny fanalefahana ny lamba amin'ny lamba. Tsy dia mora tohina amin'ny rano izy io noho ny isocyanates manitra ary azo ampiasaina hanomanana emulsion aqueous aqueous. Ny DDI dia afaka manatsara ny vokatry ny famonoana rano sy ny famoahana menaka ho an'ny lamba vita amin'ny fluorine. Rehefa ampiasaina miaraka, DDI dia afaka manatsara ny toetran'ny mpanala rano sy ny famonoana menaka ny lamba.
DDI, voaomana amin'ny asidra matavy dimer, dia karazana isocyanate maitso sy azo havaozina. Raha ampitahaina amin'ny TDI isocyanate universal, MDI, HDI ary IPDI, ny DDI dia tsy misy poizina ary tsy manentana.
Fandraisana an-tanana: Aza mifandray amin'ny rano. Hamarino tsara ny rivotra ao am-piasana.
Tehirizo: Tehirizo anaty kaontenera mihidy mafy, mangatsiaka sy maina.
Fampahalalana momba ny fitaterana: tsy fehezina ho fitaovana mampidi-doza.
Previous: Perchlorate potasioma
Manaraka: Sodium Perchlorate
Ny dingana Amoniaka Nitrate dia niorina